အချစ်ဆိုတဲ့အ၇ာမှာ ဝေးကွာခြင်းတွေါ၇ှိနေတတ်မြဲပဲ.. . ... ...ပုံပြင်လို့ မထင်ပါနဲ့နော်...
ရွှေမန်းမြို့ ကဖိုက်တာ on Wed Jun 15, 2011 2:57 am
တစ်ခါကပေ့ါ. . . ကောင်ကလေးက.ို . ... . ကောင်မလေးတစ်ယောက်က.အ၇မ်းပဲ.နှစ်သက်နေတယ် ..
ကောင်လေးဘက်ကတော့ စိတ်လှုပ်၇ှုးမှုတစ်ခုပါ. . ဒါပေးမယ့် လည်း. .. တုန်ပြန်တဲ့သဘောတ၇ား .. အ၇ာ၇ာကို တနြ်ုပန်တတ်တဲ အကြောင်းတွေကြောင့်.. သူ့၇ဲ့ဖြူစင်လှတဲ့ အချစ်ကို ကောင်လေး၇ဲ့ စိတ်တွေက မခံစားပဲ မနေနိုင်လောက်အော်ငပဲ နှစ်သက်မြတ်နိုးသွားတယ်.. . မကြာခင်..မှာပဲ သူတို့နှစ်ယောက်ဟာအ၇မ်းပဲချစ်လှတဲ့ ချစ်သူတွေဖြစ်သွားခဲ့တယ်.. ဒါပေမယ်သူတို့နှစ်ဦး၇ဲ့ကြားထဲမှာမနာတွေ၇ှိတယ်.. ဒါဟာလည်းကောင်းလေးဘက်ကပါ.. ကောင်းမလေးက တော့ အ၇မ်းပဲ၇ိုးသားတယ်ကောင်လေးကပြောတယ်လေ နင်ိကုလည်းမချု့ပ်ချယ်သလိုငါကိုလည်းမချုပ်ချယ်ပါနဲ့တဲ့. . နောက်ပြီ၇ည်းစားတွေလည်းထားချင်သလိုထားတဲ့
ဒါပြေလို့လည်း..တမျိုါ်မထင်စေချင်ဘူး ..ကောင်းလေးဘက်က မထားခဲ့ပဲ သူ့ကို ချစ်နေတယ်..မကြာခင်အတောအတွင်းပဲ မြန်မာနှစ်သစ်ကူေ၇ာက်တယ်ကော်ငမလေးကတာ့ ကောင်လေးကို ကို၇င်ဝတ်ခိုင်းလို့ကို၇င်ဝတ်တယ်..ဒါပေမယ်သူကတော့ နှစ်သစ် သူတပါးနဲ့ပျော်နေတယ်လေ...ကောင်လေးထွက်လာတော့ ..ကောင်မလေးက မျက်နှာချင်ဆိုင်၇မှာကိုကြောက်နေတယ်..နောက်ပြီတွေ့တော့ တောင်ပန်တယ်ဖွင့်ပြေတယ်လေ..၇ည်စားထားတော့မယ်တဲ့
ကော်လေး၇င်ထဲ အ၇မ်းပဲဝမ်းနည်းသွားတယ်.. ဒါလည်းသူစတဲ့ ဇတ်လမ်းပဲလေ.. သူ့၇င်ကွဲခံယုံပဲပေါ့.. ကောင်လေးက လက်ခံပါတယ်နောက်တွေ့တောူ့နဲ့ မဖြစ်ပါဘူးတဲ့စတာတဲ့ ဒါပေမယ်ကောင်းေးလမှာတော့ ၇င်ကွဲနေတုန်ပဲလေး
သူကခွေဲပြီမနေနိုင်ဘူးတဲ့ မတွေ့၇၇င် မနေတတ်ဘူးတဲ့ သူပြောခဲ့တာတွေက အခုတော့လည်းသူပဲထားခဲ့တာ
သူပျော်ဖို့အတွက်လေကောင်လေဘက်ကအကုန်ဖြည်းဆည်းပေးခဲ့တယ်... .မကြာခင်မှာပဲ ..ကျောင်တော်က ဖွင့်တော့ သူက
ပြောလာတယ်.. .ဒီတစ်ခါတွေ့ပြီ၇င် နောက်မတွေ့တော့ ဘူးတဲ့ ကျောင်ပိတ်မှတွေ့တော့မယ်တဲ့ ဆိုတာကျောင်ြး့ပီးမှပေ့ါ
ကော်ငလေးမှာ အ၇မ်ပဲကော်ငမလေးကို ချစ်မိနေမိတယ်လေ.. မိုင်ကုန်ပြော၇၇င် သူ နေမကောင်တဲ့ကြားကနေတောင်မှ သူဆီကို မိုးေ၇ထဲမှာသွားပြီတော့ ကြည်နေ၇တယ်...အဝေးကြည့်ပေါ့ဗျာ.. အခုဆိုကောင်လေးဘက်က အချိန်တိူင်မှာကောင်မလေးက ဆက်သွယ်မယ့် အချိန်ကိမျှော်နေ၇တယ်ကောင်လေးဘက်က ဆက်သွယ်ခွင့်မ၇ှိဘူးလေ... ကော်ငလေးတော့ အခုချိန်ထိဝမ်နည်းခံစားနေ၇တယ်ဗျာ . . ကောင်းမလေးကို သိ၇င်ပြောပေးကြပါဗျာကော်ငလေးအချိန်တိုင်းမှာငိုနေတယ်လို့ပေါ.. ပြန်လာမယ်အချိန်အချိန်ကိုမျှော်လင့်နေတယ်လို့ပါနော်